Erego Nabadeed oo ka ambabaxay Gob. bari Una kicitimay Xalinta Colaada Karkaar – SBC
Erego Nabadeed oo ka ambabaxay Gob. bari Una kicitimay Xalinta Colaada Karkaar
Ergadan Nabadeed ee maanta u amba baxay goobihii ay dhawaan dagaaladu kadheceen ee Gobolka Kar kaar ayaa isugu jiaray Isimo Nabadoono Culimo iyo Ganacsato waxayna isu xilsaareen sidii ay qayb uga noqon lahayeen dadka ku hawlan sidii loo soo afjari lahaa colaada u dhexaysa laba Beelood oo walaalo ah degana Gobolada karkaar iyo Bari.
Ergadan Nabadeed ayaa ay tiradoodu gaaraysay 25 qof waxaana Hogaaminayey Beldaaje Ismaaciil Beldaaje Yaasiin Beeldaaje Cal Bari
Gudoomiyaha Nabadoonada Gobolka Bari Nabadoon C/duqaadir Axmad ibraahim Xarago oo kamid ah Ergadaasi oo intii aysan bixin kahor Shir jaraa,id Saxaafada ugu Qabtay Hotel Juba ayaa waxa uu sheeagay in ujeedka socdaalkoodu uu yahay sidii ay qayb ugu noqon lahaayeen dadka ku hawalan daminta colaadaasi wuxuuna sheega in ay kubiirayaan dadkii halkaasi horay ujoogay oo uu xusay Nabadoonku in ciidamo puntland katirsani ay halkaasi joogaan ,
Nabadoon Xarago ayaa Baaq nabadeed u diray beelaha ay colaadu ka dhaxayso wuxuuna ugu baaqay in ay si shuruud la aan ah ay ujoojiyaan xabada isuguna yimaadaan miiska wadahadalka .
Ugu danbeyntii Nabadoon xargo ayaa sidoo kale baaq udiray Jaaliyadaha Reer Puntland ee kusugan dibada in ay iyagun soo qataan doorka ay arinkan ku leeyihiin.
Dhanka kale Caaqil ciise maxamad ciise oo isna kamid ahaa waxgaradkii maanta Bari ka baxay ayaa Baaq u diray isimada kale ee kunool deegaanada Puntland gaar ahaan kuwa Gobolada Nugaal iyo Mudug oo uu sheegay in waxgaradkaasi looga baahan yahay in ay iyaguna ay qaataan door kooda waxgarad nimo .
Ergadan ayaa noqonaysa Ergadii ug Balaarneed ee gaaarta Goobhii ay dhawaan Dagaal beeleed yadu ka dheceen ee Gobolka Karkaar.